सबै षडयन्त्रको हिसाव निर्वाचनबाट लिने ओलीको घोषणा, के हो यर्थाथ ? — Imandarmedia.com
सबै षडयन्त्रको हिसाव निर्वाचनबाट लिने ओलीको घोषणा, के हो यर्थाथ ?
काठमाडौ। भदौ १२ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै षडयन्त्रको हिसाव आगामी निर्वाचनबाट लिने बताउनुभएको छ । युवा संघ, नेपालले ललितपुरको लुभुमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभयो ।
माधव नेपालको रोडम्याप : सत्ता, संगठन र गठबन्धन ओली जिल्ल ?